INGELOSI INANI 888 INTSINGISELO + YESIMBOLI - INANI
Ingelosi Inani 888 Intsingiselo yokomoya + Uphawu
INTSINGISELO YOKUNGCONO 888
Ngaba uphila obona bomi bumnandi? Ingelosi inamba 888 ithwala ukungcangcazela kokusebenza kwakho kanzima uhlawula, uhambela phambili, kunye nokuninzi kakhulu ngazo zonke iindlela… ngakumbi xa kuziwa kwezemali. Ungalindela isiphango senkqubela phambili yezemali, ukuqokelela ubutyebi, kunye nokuphumelela ebomini! Xa eli nani libonakala kuwe njengomqondiso, yonwabile kuba usikelelwe ngamandla angenamda. Inani u-8 xa lijikiselwe ecaleni luphawu olungapheliyo, olumele apho umthombo wethu WENYANISO wobuninzi obungenamkhawulo uvela… Umthombo, uThixo, OM, uMdali oyintloko, uMthombo weNdawo yonke, okanye elinye igama elinokuthi livisisane nawe kakhulu. Yiya phambili ngokuzithemba ukuba Umhlaba yimbatyisi yakho ’ kwaye akukho nto inokukuthintela ekufezekiseni impumelelo, ulonwabo, uxolo, imvisiswano, uthando, kunye nazo zonke izinto ezintle ebomini ekufuneka uzinike- yazi nje ukuba uzifanele kwaye uzifanelekile ezi zinto kwaye iingelosi kunye neNdalo zihlala zikuxhasa.
Kudala usenza umsebenzi omkhulu ekugcineni iingcinga, amagama, kunye nezenzo zakho zintle, kwaye uqonde ukuba nantoni na oyikhupheleyo kwiNdawo iphela ibuyela kuwe. Cinga into oyitsalayo ebomini bakho ngeli xesha ukuba ‘yikarma elungileyo.’ Xa usenzela abanye izinto, uyenza usuka kwindawo yokwenene entliziyweni yakho ukuba uyinike ngothando nemfesane.
Umyalezo osemva kwe-888 ukwamele ukulinganisela. Ngoku ukuba ubeke isiseko sesiseko esomeleleyo, bhala phantsi kwijenali EYAhamba kakuhle ebomini bakho kwaye yintoni enokuphuculwa. Ukusuka apho, thatha inyathelo ubuye umva kwaye uhlale ulungile kwimeko ezolileyo, ekhululekile yokuba, uzivumele ukuba uhambe nokuhamba kweNdalo iphela. Thatha ixesha lokunxibelelana nawe ngokucamngca, ukumamela intu yakho, kunye nokukhula ngokomoya.
Ingelosi inombolo 888 sisikhumbuzo sokubulela uMhlaba ngeentsikelelo kunye nemimangaliso engena ebomini bakho kwaye uyathemba ukuba yonke into ihlala isebenza kungekuphela kokulungileyo kwakho kodwa okulunge kakhulu kubo bonke. Naluphi na utshintsho olwenzekayo ebomini bakho lolona luhle, kwaye iingelosi kunye noMhlaba wonke zilapha ecaleni kwakho onke amanyathelo endlela.
Eyona ndawo ilungileyo yokuthenga iziyobisi kulusu olunamafutha
amafutha okuthambisa ulusu olunamafutha